Ako avy ao amin’ny tontolon’ny bilaogy Toniziana · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraMohamed Marwen Meddah
Voadika ny 14 Marsa 2019 4:06 GMT
Mitantara momba ny zava-misy iainan'ireo injeniera sy programera informatika Toniziana (amin'ny teny Frantsay) ny lahatsoratr'i Mochekes, Slaim kosa milaza momba ny fananganana tranonkala izay ho karazana tsenam-bola ho an'ny orinasan'ny teknolojiam-baovao ahafahan'ny injeniera Toniziana rehetra manombana ny orinasa iasany na efa niasany, ary hanakalozana vaovao mahasoa ho fampivelarana kokoa ny tena manokana sy ny fitantanana ny asa any Tonizia. Mihevitra izy fa fitaovana mety ho tonga lafatra izany hanaovana tombana isan'andro isan'ora momba ireo orinasa sy ny mpampiasa ka manery azy ireo sy manosika azy ireo hanao/hitondra tena tsara kokoa ary hanome bebe kokoa.
Zizou indray mitantara ny famonoana an'i Gebran Toueni avy any Beirut, mamoaka lahatsoratra momba ny famonoana, ny fihetseham-po sy ny fanehoan-kevitra momba izany teny an-dalamben'i Libanona sy ny fandevenana goavana (amin'ny teny frantsay).
Tom indray manoratra ny tontolon'ny asa sy ny maha-rafitra madinika azy manokana izay ahitana olona maro samihafa, nampiarahana tsy misy ny safidin'izy ireo, miara-monina sy mifanerasera, manangana karazana fifandraisana samihafa etsy sy eroa, ary miasa ho an'ny tanjony manokana sy ho an'ny lalany manokana ny rehetra.
Nothing just illusion manoratra mikasika ny fandraràna ilay mpihira Libaney malaza Marcel Khalifa ao Tonizia noho ny hafany ho an'ireo gadra Arabo rehetra any amin'ny fonja Israeliana sy ny fonja Arabo nandritra ny fampisehoana nataony tany Tonizia .
Sup'Comian boy mihevitra fa lafo loatra ny vidin'ny ADSL any Tonizia. Mampitaha ny vidiny any Tonizia izy, 50 dinar Toniziana amin'ny vidiny any Eoropa ny fifandraisana ratsy 128K, izay avo roa heny amin'i Tonizia ny fidiram-bola ankapobeny. Mahazo tombontsoa goavana isan-taona ny Tunisie Telecom, mihevitra izy fa azo atao ny mampihena ny vidin'ny fifandraisana amin'ny aterineto sy hanamora ny fidirana amin'izany.
Nitsikera ny mpanangom-baovao amin'ny bilaogy Toniziana noho ny tsy fampidirana ny blaogin'ireo mpanohitra antserasera Toniziana i Sami, izay tsy tena marina na diso tanteraka, ary mihevitra fa miresaka momba ny olana rehetra manerantany fa tsy ny olana goavana ao Tonizia ankehitriny ireo bilaogera Toniziana ao amin'ny mpanangom-baovao, ary ny hany ataon'izy ireo dia ny maneho ity fahitana ara-pizahantany nohatsaraina an'i Tonizia ity.
Mochekes manoratra momba ny Tunisiana, mpandraharaha finday voalohany tsy miankina ao Tonizia, izay hanomboka tolotra aterineto 300 kb/s amin'ny volana febroary, manangana sehatra EDGE izay teknolojia 2.75G.
Tarek kosa miezaka mamaly ny adihevitra efa hatry ny ela: inona no tena fitsipika mifehy ny Astrolojia? Noho izy tsy tena Siansa tanteraka, na Sampan'ny Olombelona, mampiasa ny famaritana ny voambolana “Business” amin'ny rakibolana etimolojika amin'ny aterineto izy mba hamintinana fa afaka miditra ao anatin'ny sokajy fandraharahana ny astrolojia.
Maniry i Zied mba hitovy kokoa an'i Singapaoro i Tonizia. Maniry izy mba ho afaka manangana teknolojia sy tolotra manerantany mifototra amin'ny toekarena izahay, ka mba ho oniversite 20 voalohany mendrika indrindra manerantany ny Anjerimanontolon'i Tonizia ary ho lasa hery matanjaka eo amin'ny tontolon'ny bilaogy iraisam-pirenena ireo bilaogera Toniziana.
Chouchitou miresaka momba ireo taratasy kely sy tolotra voaranay tamin'ny boaty mailaka kanefa tsy manome zava-baovao na sarobidy izy ireo, fa zavatra mahazatra hita eny rehetra eny. Tsy miavaka mihitsy ilay tolotra manokana ary nijanona teny atsasa-dalana ny haivarotra (amin'ny teny Frantsay).